Sunday January 06, 2019 - 12:48:38 in Wararka by
Qaar kamid ah qabaa'ilka reer Bu'aale ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal maalmahan kasoo baxayay hoggaamiyaha maamulka Jubbaland, Axmad Madiibe hadalkaas oo ahaa in uu qabsanayo magaalada Bu'aale oo caasimad u ah gobolka Jubbada Dhexe.
Sawir xilli habeen ah laga qaaday Bu'aale
Qabaa’ilka Bu’aale oo ka reystay isdilkii, isu amar ku taaglayntii, qabyaaladdii iyo muqaadaraadkii kuna tallaabsaday horumar iyo ammaan ayaa warka Axmad Madoobe u arkay mid cadawtooyo, waxayna sheegeen in ay gacan adag kala hor tagi doonaan kuna dhigi doonaan dhib uusan kasoo waaqsan.
Mas’uuliyiin ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa shalay Bu’aale kula kulmay Qabaa’ilka Bartire iyo Cawlyahan waxaana la isku afgartay in si wada jir ah looga hor tago malleyshiyada Axmad Madoobe. Waxaa jira qabaa’il kale oo iyagana kulamo qorsheynaya. Sidoo kale beesha Ajuuraan oo kamid ah beelaha dega Bu’aale ayaa waxay jaaliyaddeeda Kenya qaadatay kulan ay uga soo hor jeedo hadalka Axmad Madoobe.
Arrimahan oo dhan waxaad uga bogan kartaan oo aad ka dhageysan kartaan Linkiga hoose
Halkan ka degso ama hoos ka dhageyso
Dhageyso: Al Shabaab oo ku baaqay in ladilo guddoomiyaha gobolka Mudug ee Diinta ugefay.
Sawaariikh Markale lagu weeraray dhismaha Safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad.
Dhageyso: Afhayeenka ciidanka Al Shabaab oo ka hadlay sababta ay saraakiishii ciidan ugu laayeen Gaalkacyo.
Ciidamada dowladda oo markale xiray waddooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho.
Dowladda Kenya oo sheegtay in ay Qunsuliyad ka furanayso magaalada Hargeysa.
Markab Shidaal oo lagu qarxiyay dekadda magaalada Jiddah.
XSHM oo sheegatay mas'uuliyadda qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo.